Mukaka wakagadziriswa uye coconut flan | Kicheni Mapepa
Yakagadziriswa mukaka uye coconut flan
Maria vazquez | 18/04/2021 10:00 | Desserts
Ungada kuzvibata iwe kune chinotapira chinonaka here? mabvazuva mukaka wakanyoroveswa uye coconut flan Zviri nyore kwazvo kugadzirira uye inogona kuve dhizeti inonaka yekuisa yekupedzisa yekubata kudya. Sevha kamukira nekuti ndine chokwadi kuti uchaishandisa mumhemberero dzinotevera.
Makasitadhi anogara ari a chishandiso chakakura kana iwe uine vaenzi. Izvo zvinogona kuitwa zuva rakapfuura kuti iwe ugone kunakidzwa nemhemberero iwe usinga zive yekicheni. Izvi zvakare zvine kubata kwakanyanya nekusanganisira kokonati yakakangwa kumidziyo yayo.
Kokonati yakakangwa inogona kuiswa nenzira dzakasiyana sekukuratidzira kwandinoita iwe nhanho nhanho. Ini pachangu ndinofarira kuti pane diki diki rekokonati pachigadziko asi rinogona kutenderedzwa zvakaenzana mukati memusanganiswa zvakare. Ungashinga kuigadzirira here? Unoda zvishoma zvigadzirwa zvacho. Uye kana iwe uchida puddings, usazeze uye edza iyi futi. microwave bhisikiti flan.
Mukaka wakanyoroveswa uye coconut flan yatinogadzirira nhasi inyanzvi huru kana iwe uine vaenzi sezvo inogona kusiiwa ichigadzirwa pamberi.
Recipe mhando: Kudya
Kubika nguva: 45 M
Nguva yakazara: 1 h
6 tablespoons yeshuga
2 tablespoons emvura
Madonhwe mashoma emuto werimu
300 magiramu emukaka wakanyoroveswa
Mamililita mazana matanhatu emukaka wese
3-4 mashupuni ekonati yakagadzirwa
Tinotanga nekugadzirira caramel. Kuti tiite izvi, tinoisa shuga, mvura uye muto wemonimu mupani. Sakanidza uye ubike pamusoro pepakati-wakanyanya kupisa kuitira kuti caramel iumbe isina kufambisa saga kana kusimudzira caramel. Tinomirira iyo kuti ibudirire kune yakanaka goridhe ruvara. Ipapo, tinoidururira muflanera, tichiiparadzira zvakanaka pamusoro pehwaro nemadziro.
Ipapo, tinopisa huni kusvika 190ºC uye tinoisa mukati pakureba kwepakati tsime rine hudzamu hwakakwana kudururira zvigunwe zvitatu zvemvura uye kuti izvi hazvirasike kana uchiisa flanera.
Isu tava kugadzirira iyo flan. Kuti tiite izvi, tinorova mazai uye toasanganisa, tichishandisa mamwe matanda, nemukaka wakanyoroveswa uye nemukaka wese kusvika zvanyatsobatanidzwa.
Muchikamu chakapfuura tinogona zvakare sanganisa iyo yakakangwa kokonati. Kana kudira iyo mukanyiwa muFlanera uye wosasa coconut pamusoro payo, kuitira kuti kana yabikwa uye yapidigurwa, diki diki rekokonati rinosara pazasi.
Kamwe mukanyiwa uri muflan kana muforoma tinoenda nawo kuchoto ku bika flan mubhain-marie kwemaminitsi 40-45.
Kana nguva yapfuura, tinoongorora kuti zvaitwa uye tozvitora muchoto kuti zvinyorove. Ipapo tinomutora kuenda ku firiji kwemaawa maviri.
Pakupedzisira isu takasunungura iwo mukaka wakanyoroveswa uye coconut flan ndokuushandira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Desserts » Yakagadziriswa mukaka uye coconut flan
Bhinzi chena neholiflower nespinashi